Otu esi agbanwe caliper breeki diski - Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Otu esi agbanwe caliper breeki diski
N'ozuzu, breeki calipers bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya, ma na-achọ ka edochie obere oge karịa pad na diski, mana ọ bụrụ na ị ga-agbanwe otu, nke a bụ otu esi eme ya!
Enwere ọtụtụ ihe nrụnye breeki dị iche iche, mana n'ọtụtụ oge, ụgbọ ala nwere otu piston sliding calipers nke na-adabara n'otu ụzọ ahụ.A na-ejikọta caliper na onye na-ebu ụgbọ ala nke ejikọrọ na oghere ụgbọ ala.Ọ bụ ezie na ị nwere ike dochie calipers n'otu n'otu, pad na diski na-adị mkpa ka edochie ya n'ụzọ abụọ n'ofe axle.
Anwala ịgbanwe caliper ọ gwụla ma ị ma ihe ị na-eme, ma ọ bụ na ị nwere nlekọta ọkachamara.Ị nweghị ike itinye ihe egwu na ihe ọ bụla nke sistemu breeki ụgbọ ala.
Jikọọ ụgbọ ala ahụ nke ọma, jiri ihe nkwụnye axle na chocks wheel wee wepụ ụzọ ahụ.wheel.
A na-agbanyekarị onye na-ebu ya na oghere na bọtịnụ abụọ, enwere ike ịhapụ ndị a ma ọ bụrụ na ị na-agbanwe naanị caliper - mana ọ ga-adị mkpa ka ewepụ ya ma ọ bụrụ na ị na-agbanwekwa diski ahụ.
A na-echekwa caliper ahụ n'aka onye na-ebu ya nwere bolts abụọ, na-ejikarị isi Allen, nke na-echekwa otu ụzọ ntụtụ na-amị amị n'ime ahụ caliper.
Site na iwepu bolts Allen, ị ga-enwe ike ị nweta caliper nke ọma na diski ahụ.Ọ nwere ike ịdị aghụghọ iwepụ, yabụ kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe mgbochi pry.
Na caliper wepụrụ, mpe mpe akwa ga-aputa - a na-ejikarị obere vidiyo na-edobe ha.
Ọ dị mkpa ka ejiri nlezianya wepụ ahịrị breeki na caliper.Ị ga-achọ ebe nchekwa iji jide mmiri breeki ọ bụla ga-awụfu (enwetala nke a na eserese).
Site na caliper ọhụrụ ahụ hụ na a na-atụgharị piston azụ n'ime cylinder ya jiri ụzọ pọmpụ mmiri, ihe nkedo G, ma ọ bụ ihe yiri ya.Pistons azụ na-abụkarị ụdị 'ikuku-azụ' dị iche iche ma ọ dị mkpa ka ejiri ngwa breeki azụ azụ n'ime cylinder.Ndị a dị ọnụ ala ịzụta, ma dị mfe iji.
Enwere ike ịmegharị pads ahụ na caliper (ya na mkpachị ma ọ bụ ntụtụ ọ bụla dị mkpa) na caliper na-agbanye n'elu ụgbọelu ahụ.
Tinyegharịa bolts na-amị amị caliper wee lelee na ha na-aga nke ọma wee were were were.
Gbanwee oghere ma hụ na calipers dị n'elu diski ahụ nke ọma, na-enweghị njikọ (ụfọdụ ọkụ ka a ga-atụ anya ya).
Ebe bolts niile echekwara, ọ dị mkpa ka etinyeghachi eriri breeki ahụ, na caliper gbakwara ọbara iji wepụ ikuku.
Soro usoro ọbara ọgbụgba a na-emebu (ma ọ bụ site na ngwa ọbara nke otu onye, ​​ma ọ bụ site n'enyemaka nke onye inyeaka, wee hụ na ị ga-edobe ebe nchekwa mmiri breeki ruo ọkwa ziri ezi.
Lelee bolts niile tupu ịtinye wiilịgharị ahụ ma na-atụgharị bolts/nut wheel na ọkwa a kapịrị ọnụ.
Mara na pedal breeki nwere ike ịchọ ọtụtụ 'nfuli' iji weta pad ahụ na kọntaktị na diski ahụ.Gbaa nke ọma ma hụ na breeki na-arụ ọrụ nke ọma.
Caliper eburu ọkara Mpempe akwụkwọ breeki na ọnụ ahịa calipers Jak Brake Caliper Caliper edoziri Teal breeki Calipers Caliper Saab